Home Wararka Muxaadaradii wadaadka xag jirka ah ee Sheekh Umul oo gebi ahaanba la...
Muxaadaradii wadaadka xag jirka ah ee Sheekh Umul oo gebi ahaanba la baajiyay cabsi darteed
Kaddib markii ay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay shalay bilaabeen mudaaharadyo looga soo horjeeda wadaadka mayalka adag ee taageera dowladda Farmaajo in uu ku qabto magaalada Muqdisho muxaadaro uu ku wacyi gelinayo shacabka aya waxaa ka dhalatay shaqaaqo saameysay dhammaan magaalada Muqdisho.
Culumada Ahlu Sunna oo aan u kala harin aya ka biyo diiday in Umul uu muxaadaro ku qabto magaalada Muqdisho, waxaana markii ugu horreysay si adag uga hadlay Sheekh Cabdulqaadir Soomow kaasoo sheegay in fatwooyinkiisa loo dilay dad badan oo shacab ah isagoo ku tilmaamay Sheekh Umul in uu yahay gacan ku dhiigle isla markaana aaminsan fekerka xagjirnimo ee kooxda Al Shabaab.
Sheekh Umul aya dhowr jeer oo hore u gefay Nabigeena Nabadgalyo & Naxariis korkiisa ha ahaato. Sheekh Umul aya iska fogeeyay eedeeymahaas, waxaana intaa kaddib ay shacabka soo bandhigeen muuqaalo laga duubay Sheekh Umul markuu aqrinayay muxaadarooyin uu qaarna ku tilmaamay Madaxdii hore in ay yihiin riddo iyo kuwo kale oo uu caayay Nabi Maxamed Nabadgelyo & Naxariisk korkiisa ah ahaatee.
Dowladda ay isku dayday in ay culumada ku qanciso in Sheekh Umul loo ogolaada Muxaadarada oo lagu waday in ay maalinta berrito ah ka dhacdo garoonka istaadiyo koonis, balse culumada aya si adag uga biyo diiday codsi uga yimid MW Farmaajo.